Bayaanka Takoorka La'aanta - Xarunta Caafimaadka ee Sadler
Siyaasadda ADM 113: Bayaanka Takoorka
Xarunta Caafimaadka Sadler waxay u hoggaansantaa sharciyada xuquuqda madaniga ah ee federaalka mana takoorto, ula dhaqanto dadka si kala duwan ama kama saarto iyaga iyadoo lagu salaynayo da’da, midabka, caqiidada, qowmiyadda, diinta, asalka qaran, heerka guurka, jinsiga, nooca galmada, aqoonsiga jinsiga. ama muujinta, naafanimada, mujaahid ama darajada milatari, ama saldhig kasta oo kale oo uu mamnuucay federaalka, gobolka, ama sharciga deegaanka.
Siyaasaddani waxay qusaysaa dhammaan xubnaha bulshada Xarunta Caafimaadka Sadler, oo ay ku jiraan bukaannada, shaqaalaha, bixiyeyaasha adeegga qandaraaska leh, iyo mutadawiciinta, iyo dhammaan iibiyeyaasha, wakiilada, xubnaha guddiga iyo shakhsiyaadka kale ee bixiya adeegyada ama magaca Xarunta Caafimaadka Sadler.
Xarunta Caafimaadka Sadler:
Waxay siisaa kaalmo iyo adeegyo bilaash ah dadka naafada ah si ay si hufan noola xiriiraan, sida:
Turjubaano luuqadda dhegoolaha oo aqoon leh
Macluumaad qoran iyo qaabab kale (daabacaadda waaweyn, maqalka, qaababka elektarooniga ah ee la heli karo, qaabab kale).
Waxay siisaa adeegyo luqadeed bilaash ah dadka aan afkooda koowaad ahayn Ingiriisi, sida:
Turjubaano aqoon leh
Warbixin ku qoran afaf kale
Haddii aad u baahan tahay adeegyadan, la xidhiidh Maamulaha Tababarka.
Haddii aad aaminsantahay in Xarunta Caafimaadka ee Sadler ay ku guul darraysatay inay bixiso adeegyadan ama lagu takooray si kale iyadoo loo eegayo isir, midab, asal qaran, da’, naafo, ama jinsi, waxaad ku xaraysan kartaa cabasho:
Waxaad cabashada ku xaraysan kartaa qof ahaan ama boostada, fakiska, ama iimaylka. Haddii aad u baahan tahay in lagaa caawiyo xereynta cabashada, Maamulaha Tababarka ayaa diyaar u ah inuu ku caawiyo.
Waxa kale oo aad ka fayl garaysan kartaa madaniga ah Waaxda Caafimaadka iyo Adeegyada Aadanaha ee Maraykanka, xafiiska Xuquuqaha Madaniga ah, qaab elektaroonig ah iyada oo loo sii marayo Xariirka Cabashada Xuquuqda Madaniga ah, oo laga heli karo https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf , ama boostada ama telefoon ahaan:
Waaxda Caafimaadka iyo Adeegyada Aadanaha ee Mareykanka
Qolka 509F, Dhismaha HHH
Foomamka cabashooyinka ayaa laga heli karaa http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index/html
Taariikhda Ansixinta: 12/22/2020
Waxaa ansixiyay: Guddiga Maamulka
Taariikhda Dhaqan-galka: 12/22/2020
Xarunta Caafimaadka ee Sadler » Bayaanka Takoorka La’aanta